आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको केटो जब छोरी माग्न त्यहि घर पुगेपछि…. – Sidha Post 24
प्रेम के हो ? टेरेसाबाट सिक्नुस्﻿
उनले केही समय शिक्षण पेसा अपनाइन् र पछि नर्सको तालिम लिएर दुःखी, गरिब र बिरामीप्रति समर्पित भइन् । गरिब र बिरामीलाई मद्दत गरेकै कारण टेरेसा १९७७ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट विभूषित भएकी थिइन् । पूरै जीवन अरूको सेवामा समर्पित मदर टेरेसाको जन्म २६ अगस्ट १९१० मा मसेडोनियाको स्काब्जे सहरमा भएको थियो ।
परोपकारलाई जीवनको एक मात्र उद्देश्य बनाएकी टेरेसाको मृत्यु ५ डिसेम्बर १९९७ मा भयो । तर, उनी संसारलाई प्रेम सिकाएर बिदा भएकी छिन् । उनको जीवनोपयोगी केही भनाइ विश्वास खड्काथोकीले संकलन गरेका छन् :
मानिस मृत्युपश्चात् स्वर्ग पुग्ने श्वैरकल्पनामा हुन्छ तर लामो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे भने सोच्दैन । मृत्यु अवश्यम्भावी हो भन्ने मानिसलाई ज्ञान हुँदाहुँदै पनि थुप्रै कुकर्म गर्न पछि पर्दैन । कतिपय मानिस स्वर्ग पुग्ने अपेक्षाका कारण पाप कर्मबाट सचेत पनि हुन्छन् ।
तर, मदर टेरेसाको भने मृत्युपछि स्वर्ग जाने चाहना थिएन । उनी धर्तीमै स्वर्ग देख्न चाहन्थिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘म स्वर्गभन्दा बाहिर रहेर पनि त्यस्ता मानिसको मनमा किरण जन्माउँछु, जो अन्धकारमा छन् ।’
कति मानिस विगतको असफलतालाई कल्पेर निराश भएका हुन्छन् । विगतका केही असफलताका कारण आउने दिनलाई पनि अन्धकार देख्छन् र वर्तमानमा उत्साहका साथ काम गर्न हतोत्साहित हुन्छन् ।
तर, यस्ता मानशिकताका मानिसका लागि टेरेसा ऊर्जा भर्ने गर्छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘बितेको समय बितिसक्यो । आउनेवाला समय अहिलेसम्म आएकै छैन । मसँग मात्र आजको दिन बाँकी छ ।’ उनको यो भनाइले धेरैलाई आजै काम र प्रेम गर्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्छ ।
मलाई बिहा\_न बिहा’न धेरै गर्नु मन लाग्छ के गर्ने हो’ला सोल्टिहरु?